कोरोनाले दिएको पीडा, अपनाउनु पर्ने सावधानी र परास्त गर्ने योजना - Edolakha
कोरोनाले दिएको पीडा, अपनाउनु पर्ने सावधानी र परास्त गर्ने योजना
4 months ago/Thursday, May 27th, 2021
मुलुकभर कोरोना माहामारी फैलिएको पनि डेढ वर्ष बित्यो । यो तितो यथार्थ हो, जसका कारण हालसम्म नेपालमा ६ हजार ९ सय ५१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहर अन्तर्गत नेपालमा ५ लाख ४२ हजार २ सय ५६ जनालाई कोरोना लागिसकेको छ । कोरोना संक्रमित भएर ३ लाख ९८ हजार ४ सय ८३ जनाले स्वास्थ्य लाभ लिसकेका छन् । कोरोना संक्रमण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि हुन सक्छ । पहिलो पटक कोरोनाको उत्पति गत वर्ष चिनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भयो । त्यसपछि अन्य देशमा हुँदै नेपालमा पनि देखा पर्यो र दोलखासम्म आइपुग्यो । सो समयमा लकडाउन र कोरोना महामारीले मानवीय र अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो क्षेति पुर्याएको छ ।
बढ्दो छ सोक
यतिखेर सिंगो मुलुक दोस्रो लहरको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोनाको चपेटामा छ । अहिले हरेक व्यक्ति डर र भयमा जिवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । पहिलो चरणको कोरोना भाइरसले थोरै समयमा धेरै मानिसमा क्षति पुर्याएन तर दोश्रो लहर अन्तर्गत अहिले दैनिक डेढ सय देखि २ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाईरहेका छन् । दोस्रो लहरको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरस निकै जटिल प्रकृतिको रहेकोले अहिले मानिसलाई यससँग जुध्न निकै कठिन भईरहेको छ । यो माहामारीले सबैमा पीडा थपिदिएको छ । कोरोनाका कारण आमाबुबा गुमाएर बालबालिका टुहुरा भएका छन्, धेरैको सिन्दुर पुछिएको छ । कतिपय आफ्ना छोराछोरीको बियोगमा बाँच्नु परेको छ । देश र जनताले आशा र भरोषा राखेका केही नेता, जनप्रतिनिधिदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, चिकित्सकसम्मले ज्यान गुमाईरहेका छन् ।
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरस निकै जटिल प्रकृतिको हुने र संक्रमण हुनासाथ यसले फोक्सो तथा मुटुमा सिधैं आक्रमण गर्ने भएकाले छोटो समयमानै मानिसको मृत्यु हुने गरेको चरिकोट अस्पतालका प्रमुख डा. विनोद दंगालको अनुभव छ । सोही कारण उपचार हुन नपाउँदै धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको अहिलेको परिस्थिति छ । कुन व्यक्तिलाई कतिखेर संक्रमण हुन्छ र ज्यान जान्छ ? अनुमान गर्न कठिन छ । लक्षण देखिएको २४ घण्टाभित्रै मृत्युवरण गर्न पुगेका थुप्रै बिरामी छन् । यद्धपी हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई ख्याल गर्न सके मात्रै पनि संक्रमित हुनवाट बच्न सकिन्छ । संक्रमित भईहाले पनि स्वास्थ्यकर्मीको प्रतक्ष्य निगरानीमा उपचार गराउने र आत्मबल बलियो बनाएर कोरोना भाईरससँग प्रतिरोध गर्नु नैं यसमाथि बिजय प्राप्त गर्ने आधार हो ।
दोलखामा कोरोनाले गाउँघर गाँज्दै
अहिले दोलखामा मात्रै ११ सय ७९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । ती मध्ये ८ सय ३८ जना सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । संक्रमण गाउँघरमा तिव्र बनेको छ, समुदायस्तरमै कोरोना फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जिल्लामा करिब १२ सय मानिसमा कोरोना देखिँदा जिल्लाभित्रै ८ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । जिल्लामा संक्रमण भई थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रिफर गरिएका ५ जना बिरामी पनि जिल्लामा सकुसल फर्किन सकेनन्, उपचारकै क्रममा उनीहरुले जिवन गुमाए । कोरोना संक्रमित भीमेश्वर नगरपालिका २ का एक ६५ वर्षीय पुरुषलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भएपछि काठमाण्डौं रिफर गरियो । काठमाण्डौंमा आईसियु पाउन नसकेपछि उनलाई हेलिकोप्टर मार्फत झापाको अस्पतालमा लगियो । तर, ती पुरुष स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्किन सकेनन् । भीमेश्वर नगरपालिका ८ बोचका एक युवकको बिबाह गरेको २२ दिनमै गत जेठ ८ गते काठमाण्डौंको एक अस्पतालमा निधन भयो । वैवाहिक समारोह र भोजकै क्रममा संक्रमित भएका ती युवकको दाम्पत्य जीवन तीन साता पनि बित्न पाएन । यस्तै, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सुरक्षित हुन भन्दै ठम्ठम् हिडेर अस्पताल पुगेका दोलखाका लोकप्रिय नेता एवँ प्रदेशसभाका साँसद पशुपति चौंलागाईको पनि कोरोनाकै कारण अल्पायुमै निधन भयो । दोलखावासी र सिंगो राष्ट्रले आशा गरेका इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट र वैचारिक नेता चौंलागाईको निधनले अपुरणीय क्षेति पुग्यो । यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । महामारीलाई नियन्त्रण गर्न नसके यस्ता दुःखद र दर्दनाक घटनाहरु दोहोरिने निश्चित प्राय छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास
दोलखामा कोरोना संक्रमितहरु धमाधम भेटिन थालेपछि सर्तकर्ता अपनाउँदै स्थानीय प्रशासनले निशेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर, पनि कोरोना संक्रमितहरु थपिने क्रम रोकिएको छैन । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिदा जिल्लामा कुनै पूर्व तयारी थिएन । पहिलो लहरको कोरोना महामारीले सिकाएको पाठले दोश्रो लहरमा भने जिल्लामा केही पूर्व तयारी भएको छ । जिल्लाका सरकारी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पतालको रुपमा विकास गरिएको छ । सोही अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ । पहिला कोरोना परिक्षणको लागि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पतालमा स्वाव संकलनगरी पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो तर, अहिले स्वाव परिक्षण पनि जिल्लाकै चरिकोट अस्पतालबाट हुँदै आएको छ । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, बागमती प्रदेशसभा सांसद बिशाल खड्का र कोरोनाकै कारण जिवन गुमाएका स्वर्गीय सांसद पशुपति चौलागाईले विनियोजन गरेको डेढ करोड बजेटबाट चरिकोट अस्पतालमा पिसिआर मेसिन सहितको ल्याव स्थापना भएको छ । सांसद चौलागाईले कोरोनालाई जित्न नसकेपनि अहिले सो ल्यावबाट जिल्लाबासीले सेवा लिँदै आइरहेका छन् ।
पहिला सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितको लागि छुट्टै आइसोलेसन हुँदैन थियो त अहिले जिल्लाका हरेक सरकारी अस्पतालहरुमा १० देखि ४३ वेड क्षमताका आइसोलेसन बनेको छ । कोरोना परिक्षणदेखि उपचारसम्म हुँदै आएको चरिकोट अस्पतालमा ४३ वेड क्षमताको आइसोलेसन र १२ वेडको एचडियु रहेको छ । सो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा थप ५ वेडको एचडियु र जिरी अस्पतालमा ५ वेडको एचडियु स्थापनाका लागि भर्खरै मात्रै अर्थ मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख बजेट दिने सहमति गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका यी सकारात्मक प्रयास हुन् ।
अव यसो गरौं
कोरोना नियन्त्रणका लागि पछिल्लो पटक प्रयासहरु जारी रहेपनि कतिपय स–साना कुरामा ध्यान नजाँदा यसले भयावह रुप लिने हो की ? भन्ने त्राश सर्वसाधारण नागरिकमा छ । जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ, स्थानीय प्रशासनले कोरोना माहामारीमा बिबाह, व्रतबन्ध, कुल पुजा अर्थात दिवाली, भोजभतेर र भिडभाड हुने कुनै पनि धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ । तर, गाउँगाउँमा विवाह, भोज भत्तेर र बली पूजा देखि भिडभाडका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । महामारीका बेला भीडभाडका साथ यस्ता कार्य गर्नु खेदजन्य कार्य हो । नागरिकको लापरवाही र आफ्नै निर्देशनको अवज्ञा हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले एक्सन लिन नसक्नुले यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् । मानिसको भीडभाड हुने यस्ता कार्यक्रमलाई कडाईका साथ निषेध नगर्ने हो भने जिल्लाका गाउँघरमा कोरोना संक्रमण अझ भयावह बन्ने निश्चित छ ।
महामारीका बेला जबसम्म मानिस स्वयँ सचेत बन्न सक्दैन अरु प्रयासले उपलव्धि हाँसिल हुन सक्दैन । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड ख्याल नगरी महामारी फैलाएर आफु, आफ्नो परिवार, छिमेकी र सिँगो गाउँलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने कि आजकै दिनदेखि सावधानी अपनाउने ? सवैले गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ । दोलखामा एकैसाथ धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण फैलिनुको मुख्य कारण चाँहि काठमाण्डौं उपत्यकासँगको सिधा सम्पर्क नैं हो । जिल्लाका करिव एक चौथाई मानिस काठमाण्डौं उपत्यकामा बस्ने अनुमान छ । कोरोनाको दोश्रो लहरको महामारी काठमाण्डौं उपत्यकामा व्यापक फैलिदासम्म दोलखाको स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पूर्व सतर्कता अपनाउन सकेनन् । विदेशवाट फर्किएकादेखि अन्य जिल्लावाट हुलका हुल जिल्लाभित्रिएका मानिसलाई स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाईनमा राख्नै सकेन । परिणामत गाउँघरसम्म सिधै संक्रमण फैलियो र अहिलेको भयावह परिस्थिती पैदा हुन पुगेको हो ।
जिल्ला वाहिरवाट गाउँ फर्किनेहरुको लर्को अझै पनि बन्द भएको छैन । आगामी दिनमा यसरी आउने मानिसलाई तोकिएको अवधिभर क्वारेन्टाईनमा अनिवार्य राख्न आवस्यक छ । संक्रमित गाउँ टोलहरुलाई शिल गरेर उच्च सतर्कता अपनाउने, पिसिआर परिक्षणका लागि स्वाब दिएकाहरु रिर्पोट नआउन्जेल जताभावि नघुम्ने, संक्रमितहरुले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र अनावस्यक भीडभाडलाई कम गर्ने गरी स्थानीय सरकार र प्रशासन कडाईका साथ लागि परे केही सातामै संक्रमणको दरमा कमी आउन सक्ने छ । यसका लागि हामी सवै प्रतिवद्ध भएर महामारीका बिरुद्ध जुट्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक जिरी एफएमको समाचार तथा कार्यक्रम प्रमुख एवँ ईदोलखा अनलाईनकी संवाददाता हुन्)
VIEWS: 3120 पटक हेरीएको